U ixtiraam sidii qof isnsaan ah, uguna adeego sidii qof nolol iyo nasiino u baahan | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud U ixtiraam sidii qof isnsaan ah, uguna adeego sidii qof nolol iyo...
U ixtiraam sidii qof isnsaan ah, uguna adeego sidii qof nolol iyo nasiino u baahan
Qoysas badan waxaa guryaha uga shaqeeya gabdho ay da’doodu u dhexeyso 8 ilaa 20 oo ay ka soo kireysteen qoysas danyar ah.
Gabdhahaas badankood fursad uma helin dugsi Quraan iyo waxbarashada aasaasiga ah, da’daasna waa midda jiheyneysa mustaqbalka qofka, waana marka uu ugu baahi badan yahay, uguna diyaarsan yahay in uu waxbarto.
Gabadha guriga kaaga shaqeyso waxay mudan tahay waxbarashada ay gabadhaadu u qalanto iyo mustaqbalka aad carruurtaada la rabto, balse duruuftu uma saamixin, adiga ayayna maanta kula nooshahay, waxaana la helayaa dugsiyo iyo iskuullo la dhigto saacado iyo maalmo kooban, ee fadlan u iftiimi mustaqbalkeeda mugdiga ah oo ku caawi in ay waxbarato.
Qaarkoodna ma dareensana qiimaha waxbarashada ee fadlan adigu ku dhiirrigeli in ay ka xorowdo xabsiga jahliga.
Xusuusteyda kama go’in qoys ay u joogtay gabar shaqaale ah oo aan deris aheyn. Dugsi iyo iskuul ayay geeyeen.
Waxay dareensiiyeen in ay ku nooshahay guriga hooyadeed. Gabdhahooda ayay kala qeybsan jireen shaqada guriga, waxayna hooyo iyo aabbe dhihi jirtay maammada iyo aabbaha qoyska. Sanadkii hore ayayna jaamacad billaawday.
Markii laga soo tago waxbarashadeeda, ula dhaqan sidii aad jeclaan laheed in laguula dhaqmo adigoo shaqaale ah. U ixtiraam sidii qof isnsaan ah, uguna adeego sidii qof nolol iyo nasiino u baahan.
Haku addoonsan shilimaadka yar ee aad waalidkeed u dirto. U dhimri oo ha u dirin shaqo aysan xamili karin. Ha dilin. Ha dulmin. Hana uga eexan haddii ay carruurtaada isku dhacaan.
Maalmaha farxadda iyo ciidaha, uga farxi sida aad ilmahaada uga farxineyso. Haddii aad baashaal iyo tamashleyn meel u aadeysaan, fadlan wad oo kaligeed ha uga tegin guriga, oo ha dareensiin sidii in ay addoon kuu tahay. In aysan jirin cid maanta kaa ceshaneysa yeysan sababin in aad dulmiso, ee ha kugu dhiirrigeliso in aad daryeesho, oo aad xaqeeeda iyo isheeda iska ilaaliso.